(ဘီလူးအမေး) လောကမှာဘယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဟာအကောင်းဆုံးလည်း ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) သဒ္ဒါတရား(ရတနာသုံးပါးယုံကြည်မယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာလက်ခံမယ်။ ကုသိုယ်ကောင်းမှူလုပ်ရမှာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ.သဒ္ဒါတရားရှိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်တာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။
(မေး) လောကမှာဘာကိုကျင်.သုံးရင်ချမ်းသာနိုင်ပါသလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) အရာရာတိုင်းမှာ ဓမ္မကို ကျင်.သုံးရင်ချမ်းသာနိုင်ပါတယ်။
(မေး) လောကမှာအကောင်းဆုံးအရသာဟာဘာပါလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) မှန်တာကိုပြော မှန်တာကိုလုပ်တဲ. သစ္စာတရားရဲ.အရသာဟာအကောင်းဆုံးပါ။
(မေး) လောကမှာဘာနဲ.အသက်ရှင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) အကြောင်းနဲ.အကျိုး၊ အကောင်းနဲ.အဆိုး၊ အမှန်နဲ.အမှား ကွဲကွဲပြားပြားမှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲခြားသိတဲ. အသိပညာနဲ.အသက်ရှင်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။
(မေး) လူ.ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာရင်ဘာနဲ.ကျော်ဖြတ်ရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) အခက်အခဲတွေကို မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ. (ယုံကြည်ချက်) နဲ.ကျော်ဖြတ်ရမယ်။
(မေး) လောကလူ.ဘဝပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ဘာနဲ.ဖြတ်ကူးရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) ကာမဂုဏ်အာရုံတွေအပေါ်မှာစိတ်ကိုလွှတ်မထားပဲနဲ. ကုသိုလ်ကောင်းမှူပေါ်မှာအမြဲသတိရနေတဲ. (သတိကြီးစွာ) ထားပြီးဖြတ်ကျော်ရမယ်။
(မေး) နာမည်ကောင်းထွက်ပြီးကျော်ကြားဖို.ဘာလုပ်ရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) ဘာပဲလုပ်လုပ် မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ် မျှမျှတတလုပ် မှန်တာပြော သစ္စာရှိ ကတိတည်ရမယ်။
(မေး) မိတ်ဆွေများခြင်ရင် ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေမြဲခြင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) (မနှမြောပါနဲ. ၊ ပေးပါ) ပေးရင်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရတယ်။ ကိုယ်ကပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လေမိတ်ဆွေပေါလေပဲ။
(မေး) နောင်ဘဝအရေးစိတ်အေးဖို.ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) သစ္စာဆိုတဲ.အမှန်တရား၊ ရှိဖို.လိုတယ်။ အသိပညာ၊ ရှိဖို.လိုတယ်။ လုံ.လဝိရိယ၊ ရှိဖို.လိုတယ်။ စွံကြဲပေးကမ်းမှူ တို.ရှိဖို.လိုတယ်။
(မေး) ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဘာနဲ.ကျော်ဖြတ်ရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) လုံ.လဝိရိယပါတဲ. ကြိုးပမ်းအားထုပ်မှူနဲ.သာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်။
(မေး) စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) ပညာဖြင်.ဆေးကြောရမယ်။ ပညာရအောင် နားလည်ခြင်စိတ် တတ်ခြင်တဲ.စိတ် သိခြင်တဲ.စိတ်ရှိရင် ပညာရမယ်။
(မေး) နေ.စဉ်စားဖို.သုံးဖို. ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို.ဘာတွေလိုလဲ ???
(ဗုဒ္ဓဖြေ) ကြိုးစားအားထုပ်ရမယ်။ နည်းပညာရှိရမယ်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှူရှိရမယ်။ ဇွဲကောင်းဖို.လိုတယ်။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 9:27 PM